Mushahar Lacageed, La Lehyahay oo La Kasbaday: Qeexitaan, Dhageyste iyo Astaamo | Martech Zone
Dhiirrigelinta mawduucu waxay ku tiirsan tahay 3 kanaal oo aasaasi ah - warbaahin lacag la siiyo, warbaahin ay iska leeyihiin iyo warbaahin kasbatay.
In kasta oo noocyadan warbaahineed aysan ku cusbeyn, haddana waxay caan ku tahay oo ku wajahan tahay warbaahinta la leeyahay iyo mid kasbatay taas oo is beddeshay, iyadoo caqabad ku ah saxaafadda lacagta badan leh. Pamela Bustard, Warbaahinta Octopus
Qeexitaannada Warbaahinta ee Lacagta, Lahaanshaha iyo Kasbashada
Sida laga soo xigtay The Media Octopus, qeexitaannadu waa:
Warbaahinta Lacagta Bixisay - Wax kasta oo la bixiyo si loogu wado taraafikada guryaha warbaahinta leh; waxaad bixinaysaa si kor loogu qaado soo-gaadhistaada kanaalka.
Warbaahinta La Leeyahay - Kanaal kasta oo isgaarsiineed ama madal ay leedahay astaantaada oo aad abuurto oo aad xakamayn karto.
Warbaahinta kasbatay - Markay dadku ka hadlayaan oo ay wadaagayaan magacaaga iyo badeecadaada, iyada oo laga jawaabayo waxyaabaha aad wadaagtay ama iyada oo la adeegsanayo tixraacyo ikhtiyaari ah Waa xayeysiis bilaash ah oo ay soo saareen taageerayaasha.
Waxaan ku dari lahaa in badiyaa isdhaafka xeeladaha. Waxaan badiyaa bilownaa olole warbaahineed oo la kasbado iyadoo la adeegsanayo xoogaa qeybsi ballaaran iyada oo loo marayo ilaha la bixiyo. The warbaahinta lacag la siiyay ilo ayaa soo bandhigaya waxa ku jira, laakiin markaa kuwo kale warbaahintu leedahay ilo ayaa soo qaadaya iyo kasban inbadan oo intaa ka badan ayaa lagu xusay marinnada bulshada.
Tags: kasbadeen warbaahintakasbaday qeexitaanka warbaahintawarbaahintu leedahayqeexitaanka warbaahintawarbaahinta lacag la siiyayqeexitaanka warbaahinta ee la bixiyaymushahar la leeyahay la kasbaday
WiFi baabuurta? Warshadaha Baabuurta Ma I Fahmaan
Faa'iidooyinka Istaraatijiyad Suuq Weyn oo Weyn